ဘားအံထောင်တွင် အကျဉ်းသား ၄၁ ဦး တိုက်ဖောက် ထွက်ပြေး၊ ဆယ်ဦးပြန်မိ - Yangon Media Group
ဘားအံထောင်တွင် အကျဉ်းသား ၄၁ ဦး တိုက်ဖောက် ထွက်ပြေး၊ ဆယ်ဦးပြန်မိ
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၁၆
ဘားအံအကျဉ်းထောင်အတွင်း ထောင်ပိုင်အမှိုက်သိမ်းယာဉ်အား ယူကာ တံခါးအဆင့်ဆင့်ကို တိုက် ဖောက်ထွက်ကာ ထောင်သား ၄၁ ဦး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး ဆယ်ဦးကို ပြန်လည်ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့ နယ် တောင်ကလေးကျေးရွာရှိ ဘားအံအကျဉ်းထောင်အတွင်း စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက် ၊ နံနက် ၈ နာရီ မိနစ် ၄ဝ ခန့်က ထောင်တွင်း ရှိ ဓမ္မာရုံတောင်ဘက် စိုက်ခင်းအ တွင်း အကျဉ်းသား ၄ဝ ကျော်သည် သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ပြီးနောက် အ မှိုက်သိမ်းယာဉ်အားယူကာ ထွက် ခွာသွားမည်ပြုစဉ် အနီးရှိ ထောင် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကိုပါ ဆွဲချထိုးကြိတ် ခဲ့ပြီး ထောင်တံခါးလေးဆင့်ကို တိုက် ဖြိုကာ မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ ကြောင်း ကရင်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ ထံမှ စုံစမ်းသိရသည်။
အကျဉ်းသား ၄ဝ ကျော်သည် မော်တော်ယာဉ်အား မောင်းနှင် ကာ ဘားအံ-လှိုင်းဘွဲ့ ကားလမ်း အတိုင်း ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်း ကရင်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ စုံစမ်း သိရသည်။ ထွက်ပြေးသွားသည့် အကျဉ်း သား အများစုမှာ မူးယစ်မှု၊ ခိုးမှုများ ဖြင့် ထောင်ကျနေသူများဖြစ်ကြောင်း ကရင်ပြည်နယ်ရဲ တပ်ဖွဲ့ထံမှစုံစမ်း သိရသည်။ ရိုက်နှက်ထိုးကြိတ်ခံရသူ အကျဉ်းထောင် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှာ လည်း ဦးခေါင်းတွင် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ ပြီး ဘားအံဆေးရုံကြီး၌ ကုသမှုခံ ယူလျက်ရှိကြောင်း ကရင်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ စုံစမ်းသိရသည်။ ထွက်ပြေးသွားသူများအနက် အကျဉ်းသား ၁ဝ ဦးကို ပြန်လည် ဖဖ်းမိခဲ့ကြောင်း ကရင်ပြည်နယ်ရဲ တပ်ဖွဲ့မှ အဆင့်မြင့်ရဲအရာရှိ တစ် ဦးက ပြောသည်။
ကရင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အ ဆင့်မြင့် ရဲအရာရှိကြီးတစ်ဦးက ”လက်ရှိ လိုက်လံဖမ်းဆီးနေတယ်။ ဖမ်းမိတာ လေးယောက်ရှိပြီ။ နောက် ထပ်တစ်ဦး မိပြီလို့ပြောတယ်။ သွား ခေါ်နေတယ်ပြောတယ်။ ထွက်ပြေး တာက ၄၁ ဦးရှိတယ်။ ပြေးတဲ့လူ တွေက အတိအကျ ပြောဖို့ခက် တယ်။ ပျံ့နှံ့ပြီးတော့ ပြေးကြတာ။ အထဲမှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ ကား ကို တက်မောင်းပြီး ထောင်တံခါးတွေ ကို တိုက်ပြီးတော့ ထွက်ပြေးတာ”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။ အကျဉ်းထောင်နှင့် နေရာအ နီး တစ်ဝိုက် ၁၅ မိုင်အတွင်း လုံခြုံ ရေးအင်အား ဖြန့်ကြက်ထားသော် လည်း အခင်းဖြစ်ချိန်က လုံခြုံရေး အားနည်းမှုကို အခွင့်ကောင်း ယူ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ¤င်းက ဆက် လက်ပြောသည်။
ထွက်ပြေးသူ အကျဉ်းသားများ ကို ပြန်လည်ဖမ်းမိပါက အမှုဖွင့် ပြီး အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ¤င်းက ပြောသည်။ ထွက်ပြေးသွားသူ အကျဉ်း သားများကို ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွဲ့တို့မှ အပူတပြင်း ပိတ်ဆို့ပြီး လိုက်လံဖမ်းဆီးနေ ကြောင်း သိရသည်။
စူပါတိုင်ဖွန်း မုန်တိုင်း မင်းကွတ်ကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် ၁၃ ဦးသေဆုံး၊ ငါးဦးပျောက
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ မြေနေရာလက်ဦးမှု ရယူလိုခြင်းက ဒီရေတောထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းမျ?
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများကို နောင်လာနောက်သားများအတွက် မျှော်တွေးပြီး စေတနာဖြင့်လုပ??
နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်တို့က သက်ကြီး သတင်းစာ ပညာရှင်များအား ဂါ
”Rock ကို အရမ်းကြိုက်ပေမယ့် ကိုယ့်အသံ အခြေအနေအရနဲ့ မိန်းကလေးလည်း ဖြစ်တာကြောင့် ရောခ့်တွေ အရမ်?